Nei Kushambadzira uye IT Zvikwata Zvichifanira Kugovera Cybersecurity Mabasa | Martech Zone
Denda iri rakawedzera kudiwa kwedhipatimendi rega rega mukati mesangano kubhadhara zvakanyanya kune cybersecurity. Izvozvo zvine musoro, handiti? Iyo yakawanda tekinoroji yatinoshandisa mumaitiro edu uye basa rezuva nezuva, ndipo panogona kunyanya kuve panjodzi yekutyorwa. Asi kugamuchirwa kwemaitiro arinani ekuchengetedza cybersecurity kunofanirwa kutanga nezvikwata zvekushambadzira zvine ruzivo.
Cybersecurity yagara iri kunetsekana neInformation Technology (IT) vatungamiri, Chief Information Security Officers (CISO) uye Chief Technology Officers (CTO) kana Chief Information Officer (CIO) Kukura kuri kuwedzera kwecybercrime - nezvinodiwa - kwakawedzera cybersecurity kupfuura iyo kungoita hanya neIT. Pakupedzisira, Vatungamiri veC-suite nemabhodhi havachaoni njodzi yecyber se 'dambudziko reIT' asi sekutyisidzira kunoda kugadziriswa pamatanho ese. Kurwisa zvizere kukuvadzwa kwakabudirira cyberattack inogona kubhadharisa zvinoda kuti makambani abatanidze cybersecurity muhurongwa hwavo hwese hwekutarisira njodzi.
Kuti dzidzivirire zvizere, makambani anofanirwa kuyera chiyero pakati pekuchengetedza, kuvanzika uye zviitiko zvevatengi. Asi masangano anogona sei kusvika pachiyero chinonyengera ichi? Nekukurudzira zvikwata zvavo zvekutengesa kuti zvitore basa rakawanda.
Sei Vashambadzi Vachifanira Kuitira hanya NezveCybersecurity?
Zita rako rechiratidzo rakangofanana nemukurumbira wako.
Zvinotora makore makumi maviri kuti uvake mukurumbira uye maminitsi mashanu kuti uuparadze.
Saka chii chinoitika kana matsotsi epa cyber akawana ruzivo uye kuwana kwavanoda kuti vabudirire kutevedzera kambani, kunyengedza vatengi vayo, kuba data, kana zvakanyanya? Dambudziko rakakura kune kambani.
Funga nezvazvo. Vanoda kusvika zana muzana emabhizinesi vanotumira pamwedzi ekushambadzira maemail kune vatengi vavo. Yese dhora rekushambadzira rinoshandiswa rinoona kudzoka pakudyara (ROI) yemadhora makumi matatu nematanhatu. Phishing kurwisa kunokuvadza rudzi rwemunhu kunotyisidzira kubudirira kwechiteshi chekushambadzira.
Sezvineiwo, zvese zviri nyore kuti scammers nevatambi vakaipa vanyepedzera kuve mumwe munhu. Tekinoroji inodzivirira iyi spoofing yakakura uye iripo, asi kurerwa kunoshaikwa nekuti dzimwe nguva zvakaoma kuti sangano reIT riratidze bhizinesi rakajeka. Royi yezviyero zvekuchengetedza musangano rese. Sezvo mabhenefiti ezviyero zvakaita seBIMI neDMARC zvichiwedzera kuoneka, kushambadzira uye IT inogona kupenda nyaya inomanikidza yakabatana. Yave nguva yeimwe nzira yakazara yecybersecurity, iyo inopwanya silos uye inowedzera kubatana pakati pemadhipatimendi.
Inoziva kuti DMARC yakakosha kuchengetedza masangano kubva mukubira nekukuvadzwa kwemukurumbira asi inonetsekana kuwana kutenga-mukati kwekuita kwayo kubva kuhutungamiriri. Zviratidziro zveMarudzi zvekuzivikanwa kweMharidzo (BIMI) inouya, ichiunza mufaro mudhipatimendi rekushambadzira, iyo inoida nekuti inovandudza mitengo yakavhurika. Iyo kambani inoshandisa DMARC uye BIMI uye voilà! IT inowana inooneka, kongiri inokunda uye kushambadzira kunogamuchira bump inobatika muROI. Munhu wese anokunda.
Kushandira pamwe Ndiko Kiyi
Vazhinji vashandi vanoona IT yavo, kushambadzira uye mamwe madhipatimendi mumasilos. Asi sezvo kurwisa kwepamhepo kunowedzera kuve kwakaoma uye kwakaoma, iyi yekufunga maitiro hakuna inobatsira. Vatengesi vanosungirwawo kubatsira kuchengetedza sangano uye data revatengi. Nekuti ivo vari padhuze zvakanyanya kune chiteshi senge pasocial media, ads uye email, vatengesi vanoshandisa uye kugovera huwandu hukuru hweruzivo.
MaCybercriminals anotanga kurwiswa kweinjiniya yemagariro anoshandisa izvi kune mukana wavo. Vanoshandisa email kutumira zvikumbiro zvenhema kana zvikumbiro. Kana akavhurwa, maemail aya anokanganisa makomputa evatengesi nemalware. Zvikwata zvakawanda zvekushambadzira zvinoshandawo nevatengesi vekunze vakasiyana-siyana uye mapuratifomu anoda kuwana kana kupanana ruzivo rwechakavanzika chebhizinesi.
Uye kana zvikwata zvekushambadzira zvichitarisirwa kuratidza kukura kweROI uchiita zvakawanda nezvishoma, ivo vanogara vachitsvaga hutsva, hutsva tekinoroji hunowedzera kugadzirwa nekubudirira. Asi kufambira mberi uku kunogona kugadzira kuvhurika kusingatarisirwe kwecyberattacks. Ndosaka vatengesi nevashandi veIT vachifanira kubuda mumasilos avo kuti vabatane uye vaone kuti kuvandudzwa kwekushambadzira hakusi kusiya kambani iri panjodzi yekuchengetedza. MaCMO nemaCISO anofanirwa kuongorora mhinduro dzisati dzaitwa uye dzidzisa vashandi vekushambadzira kuti vaone uye vataure njodzi dzinogona kuitika pacybersecurity.
IT nyanzvi dzinofanirwa kupa simba nyanzvi dzekushambadzira kuti dzive vatariri vekuchengetedza ruzivo maitiro akanakisa nekushandisa:
Password mamaneja vanoda Dashlane or LassPass.
Kusaina kamwechete (SSO)
Chimwe chishandiso chakakosha kusanganisa mune vatengesi 'cybersecurity mazano? DMARC.
Kukosha kweDMARC Kwezvikwata Zvekushambadzira
Domain-based Message Authentication, Reporting uye Conformance ndiyo chiyero chegoridhe chekusimbisa email. Makambani anotora DMARC kuEnforcement anovimbisa kuti masangano anotenderwa chete anogona kutumira maemail panzvimbo yavo.
Nekushandisa DMARC (uye maprotocol ari pasi peSPF neDKIM) zvinobudirira uye kusvika kuEnforcement, mabhureki anoona kufambiswa kwemaimeri kwakagadziridzwa. DMARC paEnforcement inodzivirira matsotsi kubva pakubata mahara pamahara akachengetedzwa.
Hapana SPF kana DKIM inotendesa mutumwa achipokana ne "Kubva:" munda unoonekwa nevashandisi. Gwaro rinotaurwa murekodhi reDMARC rinogona kuona kuti pane “kurongeka” (kureva kuti rinoenderana) pakati peinooneka Kubva: kero pamwe nedomeini yekiyi yeDKIM kana kuti SPF inotumirwa inosimbiswa. Iri zano rinodzivirira cybercriminals kubva kushandisa bogus domains mu From: ndima inonyengedza vagamuchiri uye inobvumira matsotsi kudzoreredza vashandisi vasingazive kumatunhu asina hukama ari pasi pekutonga kwavo.
Zvikwata zvekushambadzira zvinotumira maemail kwete kungonongedza vangangove vatengi. Pakupedzisira, ivo vanoda kuti maemail avhurwe uye oitwa. DMARC simbisiro inoita shuwa kuti maemail aya anosvika mumabhokisi ekutumira. Mabhureki anogona kusimbisa kusimba kwavo zvakanyanya nekuwedzera Brand Indicators yeMharidzo Identification (BIMI).
BIMI Inoshandura DMARC Kuita Inooneka Kushambadzira ROI
BIMI chishandiso chinofanira kushandiswa nemushambadzi wese. BIMI inoita kuti vatengesi vawedzere chiratidzo chemhando yavo kune maemail akachengetedzwa, ayo akaratidzwa kuwedzera mareti akavhurika negumi muzana paavhareji.
Muchidimbu, BIMI ibhenefiti yemhando yevatengesi. Iyo yakavakirwa pane yakasimba email yekusimbisa matekinoroji - DMARC pakusimbisa - uye kubatana pakati pevatambi vakasiyana kusanganisira kushambadzira, IT uye madhipatimendi ezvemitemo.
Vatengesi vagara vachivimba neakangwara, inobata nyaya mitsara kutora kutarisisa kwevanogamuchira, asi neBIMI, maemail anoshandisa logo anove nekukurumidza uye nyore kuziva. Kunyangwe kana vatengi vakasavhura iyo email, vanoona iyo logo. Kufanana nekuisa logo pa t-shirt, chivakwa, kana imwe swag, logo paemail pakarepo inodaidza vanogamuchira kutarisisa kune mhando - budiriro isati yambobvira isati yatanga isina kutanga yavhura meseji. BIMI inobatsira vatengesi kuti vapinde mubhokisi rekunyora nekukurumidza.
Valimail's DMARC seSevhisi
DMARC enforcement is nzira yekuBIMI. Kufamba nenzira iyi kunoda kuve nechokwadi chekuti DNS inonyatso simbisa tsamba dzese dzakatumirwa - chiitiko chinopedza nguva kumabhizinesi. 15% chete yemakambani akabudirira kupedza mapurojekiti avo eDMARC. Panofanira kuva neimwe nzira iri nani, handiti? Pane!
Valimail Authenticate inopa DMARC seSevhisi, kusanganisira:
Otomatiki DNS kumisikidzwa
Chiziviso chemunhu akangwara
Rondedzero yebasa iri nyore-kutevera iyo inobatsira vashandisi kuwana nekukurumidza, kuenderera mberi kweDMARC kuteedzera
DMARC Authentication™ inotora njodzi kubva kuDNS kupa. Kuonekwa kwayo kuzere kunobvumira makambani kuona kuti ndiani ari kutumira email pachinzvimbo chavo. Inotungamirwa, otomatiki workflows inofamba vashandisi kuburikidza nebasa rega rega kugadzirisa masevhisi pasina kudiwa kweruzivo rwakadzama, rwehunyanzvi kana chibvumirano chekunze hunyanzvi. Chekupedzisira, ma analytics emukati anobatsira kusimbisa otomatiki kurudziro - uye zviziviso zvinochengeta vashandisi kuenderana.
Madhipatimendi ekushambadzira haagone kugara mumasilos, akadzivirirwa kure nekunetsekana kwecybersecurity, zvakare. Nekuti ivo vanowanikwa zvakanyanya nekuda kwekuvapo kwakakura pa Twitter, LinkedIn uye mamwe masocial media mapuratifomu, matsotsi anovaona sezviri nyore, zvinoshandisika zvinangwa. Sezvo masangano anoona kukosha kwekugadzira tsika yekuziva nezve cybersecurity, vanofanirwa kukoka zvikwata zvavo zvekushambadzira kuti zvibatane patafura yekutarisira njodzi neIT neCISO zvikwata.
Tags: BIMIbrand hijackingcisectocyber kurwiswacybercrimeCybersecurityDMARCemail kusimbiswaEmail Marketingemail mukurumbiraemail mukurumbira manejimendimulti-factor kuvimbiswaphishingmbirikirospoofing